Nhau - Yakakwidziridzwa-sprocket bulldozer inosarudzwa!
Yakakwidziridzwa-sprocket bulldozer inosarudzwa!
PaMarch 12, 2020, batch re SD7N rakakwidziridzwa-sprocket bulldozer yakaendeswa kuchiteshi uye yakagadzirira kurodha kumisika yeRussia & CIS.
Aya mabatch bulldozers anotengwa nemutengi wemigodhi, kuti aite basa rekukweva nekututira zvinhu zvekuvhara. Vakatenga batch yekutanga yekukwiridzira-yekutyaira bulldozer kubva kuHBXG muna 2015. Mumakore mashanu apfuura, aya ekutanga mabatch bulldoers akapinda mukushanda kwenguva ingangoita zviuru makumi maviri zvemaawa ekushanda. Vatengi vanofarira mashandiro akanaka zvine chekuita nekuvimbika uye kushanda kwakanyanya kwema bulldozers. Kubva pakukwaniswa kwesimba rekugadzira remugodhi uyu, mutengi akaitengera mabulldozers zvakare nenzira yekubhidha. HBXG yakahwina thenda zvakare ine yakanakisa yakapihwa mhinduro inotsigirwa nehunhu hwemhando uye inogutsikana mushure-yekutengesa sevhisi chirongwa.
Parizvino, zvigadzirwa zvikuru zveSHEHW zvinofukidza bhurudhoza, pombi, giraidhi rinocheresa, kuchera rig, excavator uye rori yekuchera nezvimwe zvigadzirwa zvaro zveguruva zvinofukidza 130-430 yakazara neti track mhando yegurldozer uye zvigadzirwa zvakawedzerwa, zviri kushandiswa zvakanyanya muzvivakwa, gwenga kudzora, mafuta munda uye chiteshi chengarava, mvura-simba mainjiniya, metallurgical mugodhi, zvakatipoteredza tsvina tsvina chirimwa, purazi kuvandudza chirongwa nezvimwewo. kugadzirwa. Yakakwidziridzwa sprocket bulldozer tekinoroji iri pachinzvimbo cheiyo yepamberi tekinoroji nhanho uye yepamusoro soro yekugadzira. Dhizaini inonzwisisika uye dhizaini inosarudza iyo yakakwidziridzwa sprocket bulldozer ine maficha ehupamhi hwehunyanzvi, mhando yepamusoro, yakasimba mukurumari uye nyore kugadzirisa.
HBXG inoomerera mufilosofi sezvavaimboita kare, ichitarisa kune zvinodiwa nevatengi, kuita zvigadzirwa kugadzirisa & nekuvandudza, kukwana masevhisi ekutengesa-kutengesa, ichienderera mberi ichikurudzira kugutsikana kwevatengi kuti vaone kukura pamwe nevakabatana!
Post nguva: Aug-26-2020